Haadha abbaa warraashee ijoolleesaanii shanan ajjeeseef araara gaafatte - BBC News Afaan Oromoo
Haadha abbaa warraashee ijoolleesaanii shanan ajjeeseef araara gaafatte
Goodayyaa suuraa "Akka haadhaatti osoon fuula isaa cicciruu danda'a tahee nan raawwadha ture jette haati ijoollee ajjeefamanii Amber Kiyzer
Harmeen lammii Ameerikaa abbaa warraa ishee duraanii ijoollee ishee shan ajjeeseef mana murtii araara gaafatte.
Amber Kiiyzer jedhamti. Mana murtii Kibba Kaarooliinaatti dhiyaachuun abbaan warraa ishee ajjeechaa ijoollee isaanii shaniin himatame araara tokko illee ijoollee kootti hin argisiifne, isaan garuu baay'ee isa jaallatu jetti.
Tim Joonsi Jr nama ganna 37 yoo tahu ijoollee isaa umuriin isaanii waggaa tokkoo hanga saddetii jiran nama shan mana jireenyaa isaa keessatti bara 2014 ajjeesuun himatame.
Manni nama ijoollee isaa shan ajjeese kana hidhaa umurii guutuun ykn murtoo du'aan adabuuf jedha.
''Haati ijoollee ajjeefamanii Kaleessa mana murtiitti dhiyaachuun haala ulfaataa ijoolleen koo keessa darban natti dhagahama jette.
Akka haadhaatti osoon fuula isaa ciciruu balleessuu danda'a tahee nan raawwadha ture. Haadhummaan na keessa jiru isa kanadha. Haati tarkaanfiin fudhachuu dandeessus kanuma.''
Goodayyaa suuraa Waxabajji afur Ximotii Rey Joonsi Ligziten keessatti yeroo argame.
Kiyzer jireenya ishee guutuuf murtoo du'aa mormaa akka turte abbootii murtiitti himte.
Yeroo tokko murtoon seeraa abbaan manaa ishee kana akka lafarraa balleessu hawwitus amma murtoon du'aa akka irratti darbuuf akka hin filanne himte.
''Inni ijoolleekootti araara tokko illee hin agarsiifne. Garu ijoolleen koo isa jaallatu. Osoon akka dhuunfaakootti osoo hin taane bakka isaanii bu'ee dubbadhee waanan ani jechuu danda'u kanumadha''
Haa tahu malee waan fedhes tahu murtoo manni murtii dabarsu akka kabajju himte.
Abukaattota abbaa warraa ishee Joonsiin akka ragaa kennituuf waamamteeti kan mana murtiitti dhiyaachuun dubbatte.
Cimdiiwwan lamaan bara 2004 yeroo paarkii bashannanaa ijoollee Chikaagoo keessa hojjetan wal baranii torban jaha booda wal fuudhuun ijoollee horatan.
Goodayyaa suuraa Jonsi erga ajjeeseen booda qaama isaanii pilaastikaan maruun konkolaataa isaa keessa kaa'ee guyyoota sagaliif naannichuma keessa konkolaachisaa ture.
Haa tahu manaa inni nama amantii akka malee leellisu tahuu isaa irraa kan ka'e addaan bahan. Abbaan warraa ishee ''dubartootni ilaalamuuf malee dhaggeeffatamuuf hin uumamne'' ilaalcha jedhu akka qabu himte.
Gaa'ilaan waggoota sagaliif erga waliin jiraatanii adda bahanii booda Kaampaanii Kompitera oomishu Intel keessa waan hojjetuuf waggaatti galii miindaa $80,000 fi konkolaataa waan qabuuf akka ijoollee isaa kunuunsuuf kenniteef.
Dilbata yeroo hundumaa ijoollee ishee waliin mana nyaataa Chick fil-A jedhamu deemuun wal argiti.
Manni murtii akka jedhetti gaafa Joonsi ijoollee isaa ajjeesu gara manaa akkuma deemeen mucaan isaa ganna jahaa Naataan osoo sokkeetiidhaan qe'ee taphatuu argee ajjeese.
Sana booda ijoollee isaa hafan jahan Eliyaanaa mucaa waggaa tokkoo, ,Gabri'eel mucaa waggaa lamaa, Eeliyaas mucaa waggaa torbaa fi Meeraa kan umuriinshee waggaa saddet taate ajjeesuuf murteesse.
Manni murtii akka jedhetti hunda isaanii erga ajjeeseen booda qaama isaanii pilaastikaan maruun konkolaataa isaa keessa kaa'ee guyyoota sagaliif naannichuma keessa konkolaachisaa ture.
Booda reeffa isaanii gara Alaabaamaatti osoo baasuuf deemuu naannoo Misisiippiitti poolisiin tiraafikaa fooliin waan itti dhufeef dhaabsise.
Joonsi balleessaa hin qabu jedhee waakkatee ture. Abukaatotni ittisaa isaa immoo rakkoo sammuu irratti hin baramnetu isa mudateera jechuun falmaniif.
Yeroo haati manaa isaa ijoollee waliin isa dhiistee deemte sammuun isaa miidhameera jedhan.